Football Khabar » कोपा डेल रे फुटबल आजदेखि सुरु हुँदै : को–को भिड्दैछन् आज ?
कोपा डेल रे फुटबल आजदेखि सुरु हुँदै : को–को भिड्दैछन् आज ?
जारी सिजनअन्तर्गत स्पेनको नकआउट फुटबल प्रतियोगिता कोपा डेल रे कप आजबाट सुरु हुँदैछ । अघिल्लो साता अन्तिम ३२ को ड्र सार्वजनिक भएपछि आज रातिबाट खेल सुरु हुन लागेको हो । यसपटक यस प्रतियोगितालाई पनि नयाँ ढाँचामा खेलाइँदैछ ।
अघिल्ला सिजनहरूमा अन्तिम ३२ बाटै होम एन्ड अवे गरी दुई लेग खेलाइँदै आएकोमा यस सिजनदेखि भने मात्रै एक लिगको खेल हुनेछ । एक खेलमा विजयी हुने टिम अन्तिम १६ मा प्रवेश गर्छ । तर, सेमिफाइनलको खेल भने होम एन्ड अवे गरी दुई लेगामा खेलाइनेछ । यो नियम मात्रै सेमिफाइनलका दुई खेलमा लागू हुनेछ ।
आज पहिलो दिन जम्मा तीन खेल हुँदैछन् । जसमा पहिलो खेलमा राति ११ः४५ बजेबाट जारागोजा र मालोर्साको भिडन्त हुनेछ । अर्को खेलमा राति ११ः४५ बजेबाटै रेक्रेटिभो र ओसासुना भिड्नेछन् । आजको अन्तिम खेलमा राति १ः४५ बजेबाट सेभिल्ला र लेभान्टेको रोमाञ्चक खेल हुनेछ । बाँकी खेल अर्को दिन हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति ७ माघ २०७६, मंगलवार ०९:४६